4 gabdhood oo walaalo ah oo isku maalin dhashay isku maalina aqal gelaya | Xaysimo
Home War 4 gabdhood oo walaalo ah oo isku maalin dhashay isku maalina aqal...
4 gabdhood oo walaalo ah oo isku maalin dhashay isku maalina aqal gelaya
Afar hablood oo walaalo ah oo ku nool gobolka Kerala ee koonfurta India ayaa isla maalin qudha wada dhashay. Intay jireen oo dhanna guri bay ku wada noolaayeen, meel bay wax ku wada cunaan dhar isku eegna way gashadaan, xataa ilaa 15 jirkoodii iskuulkana meel bay wada fadhiisan jireen.
Imika afartoodiiba waxay aqal gelayaan isla maalin qudha.
Afartaa mataanood ee walaalaha ahi waxay caan noqdeen isla maalintii ay dhasheen, warbaabinta gudaha dalkaasina kacaa kufkoodii way la socotay.
Haatanna waa kuwan oo BBC-da ayay waayahooda uga waramayaan.
Afarta hablood ee walaalaa ah oo la kala yidhaa Uthra, Uthraja, Uthara, Uthama iyo walaalkood Uthrajan waxay shantooduba dhasheen 18 Noofember 1995 waxaanay haatan doonayaan in ay isla maalin qudha ay wada guursadaan sannadka dambe 26 Abriil.
“Xaafadayada waxa laga hadal hayaa waa aroosyadayad. Weli maanu soo iibsan Saadhigii xariirta ahaa ee aanu xidhan lahayn maalintaa afartayada mid waliba aroosadda tahay. laakiin waxaanu soo iibsan doonnaa dhar isku wada eeg oo isku wada nashqad ah” ayay tidhi Uthara.
Shanta mataanaha ah oo mid ba keeg jarayo maalin ka mid ah sannad guurooyinkii dhalashadooda
Iyadu waa saxafiyad ninka ay guursan doontaana isna waa weriye.
Arooskoodu wuxu noqon doonaa mid dhaqan, waana sida badanaa gaobolkaa aroosyada loo dhigo. Halka qofku isagu ka uu doorto guursado dunida kale, xagooda dadka waaweyn ee qoyska ka tirsan ayaa door wayn ka ciyaara isku doorridda dadka is guursanaya. Waxaana haatan shaqadaa qabatay hooyadood Rema Devi oo hablaheeda rag ay iyadu u doortay u soo xushay iyada oo aadgsanaysa bog internet-ka ah oo geyaanku iska doortaan.
Guurka noocan ahi waa mid labada qof ee is guursanayaa ay isku dabaqad yihiin oo ay isku dhigmaan xaga dhaqaalaha iyo tacliintaba. Dadka xidigiya ayaa eega burjiga gabadha iyo wiilka ka dibna waxay ehelooda u sheegaan in ay isku haboon yihiin iyo in kale.
Laakiin mahaa guur la isku qasbayo ee wiilka iyo gabadhu ba talo ayay ku leeyihiin qorshaha.
Hablahan mataanah ah ee aan isku eekayni waxay haatan doonayaan in aroosyadoodu isku wada ekaadaan.
Waayo ay wada muteen
Habluhu waxay tan iyo dhalashadoodii muteen waayo isku mid ah, walow aanu tartan nololeed ka dhaxaynin taasina tahay arinta qaabaysay qofnimadooda.
Markay damceen inay guursadaan, Uthraja ayaa ahayd tii ugu horraysay ee say hesha sannadkii hore laakiin kuma ay degdegin go’aankaas.
Waan ku faraxsannahay in aanaan degdegin
“Hooyadayo ayaan jeclaatay in aanu isku maalin wada aqal galno, dabeetana waxaanu go’aansannay in aan isa sugno” ayay Uthraja BBC u sheegtay.
Nasiib wanaag se Uthraja iyo ninka ay is guursan doonaan arooska kumay degdegin.
Afarta hablood iyo walaalkood
Waxay is guursanayaan Akash Kumar oo isna dhakhtar suuxdinta ah oo ka shaqeeya Bariga Dhexe.
“Run ahaantii isbitaal baan ka wada shaqayn jirnay intaanu Kuwait u dhoofin., Mudo dheer baan is naqaanay. Qoyskiisa aad bay ugu faraxsanaayeen in ay hooyaday u yimaadaan” ayay tidhi.
Waxay doonaysaa in ay laba sannadood shaqada ugu buuxsamaan si ay waayo aragnimo badan u hesho oo ay dalka uga dhoofto. Ka dib na ay saygeeda ugu tagto marka arooskoodu dhamaado ka dib.
Uthraja waxay rejaynaysaa in ay shaqo ka heli doonto Kuwait.
Uthra iyo Uthama iyaguna waxa sidoo kale guursanaya rag ka shaqeeya Bariga Dhexe.
Shan dahab ah
Waalidkoodu markay dhasheen shanta caruura ee mataanaha ahi aad bay ugu farxeen waxaanay u bixiyeen “Pancharatna” oo macnaheedu yahay shanta dahabka ah.
Caruurtu tacliinta way ku dadaaleen laakiin caafimaad qabkooda ayay welwel weyn ka qabeen waalidku.
“Markay dhasheen aad bay u miisaan yaraayeen, had iyo goorna way bukoon jireen” ayay tidhi hooyadood Rema Devi oo waayadii hore dib u xasuusatay.
Aabahood Prema Kumar iyo hooyadood Rema Devi ayaa u soo dhabar adaygay korinta shanta caruura ee mar qudha wada dhashay. Hase yeeshee culayskii wuxu saameeyey Rema Davi caafimaadkeeda.
Image captionAabahood Prema Kumar iyo hooyadood Rema Devi
Laakiin waxa masiibo ku dhacday markay habluhu sagaal jir ahaayeen. Aabahood oo tukaan qalabka xafiisyada lagu iibiyoo lahaa oo halkaa quutal daruuriga uga soo saari jiray ayaa kacay oo is dilay 2004.
Dedaal dadka intooda san lagu kobciyo
Markii qoyska uu ka dhintay odaygii masaariifta u soo saari jiray, ayaa warbaahintu tebisay masiibada ku habsatay. Dabeetana xukuumadda ayaa tallaabo qaaday oo shaqo bangi ka siisay Rema Davi.
“Waxaan xoogga saaray in aan cauurtayda koriyo. Waxay shaqadaydu noqotay in aan noloshooda iyo tacliintooda ku dedaalo” .
Prema Kumar oo Uthara baaskiil ku ciyaarsiinaya
Kacaa kufkooda waxa ka damqaday dhakhtar deganaa xaafadii ay ku noolaayeen oo guri ay degaan siiyey, qoyskuna aad ayay mar walba ugu mahadnaqaan.
“Dhibaatadu qof intiisa fiican bay soo saartaa,” ayay tidhi Rema Devi.
Dhamaan shantoodu tacliinta way ka soo dhalaaleen tacliintii oo waxay ka qalin jabiyeen jaamacadihii ay galeen.
“Hooyadayo aad bay u faraxsantahay. Waayo had iyo goor waxay dooni jirtay in aanu isku fillaano” ayay tidhi Uthara.
Warbaahinta oo isha ku haysa
Qoyskani waa Hindus waxaanay hablaha arooskoodu ka dhici doonaa macbad caana.
Ehelada dhaw iyo asxaabta oo kali ah ayaa lagu soo marti qaadi doonaa arooska. Warfidiyeenka iyo sawir qaadayaasha ayaa iyagana la filayaa in ay ku soo xoomaan.
“Inaan caan noqotaa waaba barako” ayay tidhi Uthara.
Maadaama oo mataano shan ahi ay tahay dhacdo dhif ah ayey warbaahintu isha ugu haysaa hablahan. Dhalashadoodii, intay wax baranayeen iyo ilaa haatan warbaahintu way ka war haysay.
Hablaha waalaha ahi waxay haatan ka fikiraan siday hooyadood wax u tari lahaayeen.
Waxa kale oo ay sheegeen in ay weligood gacmaha is haysan doonaan.
“Xatii hadii ay noqoto in aan dalal kala duwan ku kala noolaano dareen wadaag baanu ahaanaynaa oo is iloobi mayno” ayay tidhi Uthra.